ABF inotakura ndiro haisisipo, uye fekitari inowedzera simba rekugadzira - Pcb prototype, nhema, fekitori, mutengesi, mugadziri
» Blog » ABF inotakura ndiro haisisipo, uye fekitari inowedzera simba rekugadzira
ABF inotakura ndiro haisisipo, uye fekitari inowedzera simba rekugadzira
Nekukura kwe5g, AI uye yepamusoro-performance komputa misika, kudiwa kwevatakuri veIC, kunyanya vatakuri veABF, yaputika. Zvisinei, nekuda kwekukwanisa kukwana kwevashandi vakakodzera, kugoverwa kwevatakuri veABF kuri kushomeka uye mutengo unoramba uchikwira. Iyo indasitiri inotarisira kuti dambudziko rekushomeka kweABF inotakura mahwendefa inogona kuenderera kusvika muna 2023. Muchirevo chechinyorwa ichi, mana mahombe mahwendefa ekuisa zvirimwa muTaiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo neZhending, vatangisa ABF ndiro kurodha kuwedzera zvirongwa gore rino, ne Yese mari yemubhadharo inopfuura NT $ 65 bhiriyoni mu mainland uye Taiwan zvirimwa. Uye zvakare, ibiden yeJapan uye shinko, yeSouth Korea Samsung mota uye Dade zvemagetsi zvakawedzera mari yavo muABF anotakura mahwendefa.
Iko kudiwa uye mutengo weABF inotakura bhodhi inomuka zvakanyanya, uye kushomeka kunogona kuenderera kusvika 2023
IC substrate inogadzirwa pahodhi yeHDI bhodhi (yakakwira-kuwanda yekubatanidza wedunhu bhodhi), iyo ine hunhu hwehukomba hwepamusoro, kukwirira kwakaringana, miniaturization uye kuonda. Sezvo iyo yepakati zvinhu zvinobatanidza chip uye redunhu bhodhi muchip chiputira maitiro, iyo yepamoyo basa reABF inotakura bhodhi ndeyekuita yakakwira kuwanda uye kumhanya-kumhanya kubatana kwekubatana neiyo chip, uyezve kuyananisa nehukuru pcb board kuburikidza nemimwe mitsara pane iyo IC inotakura bhodhi, inoita basa rekubatanidza, kuitira kuchengetedza kutendeka kwedunhu, kudzikisira kuvuza, gadzirisa mutsetse nzvimbo Inobatsira kupisa kwakanyanya kupisa kweye chip kuchengetedza chip, uye kunyangwe kupinza isina basa uye inoshanda zvishandiso kuti uwane mamwe masisitimu mashandiro.
Parizvino, mumunda wepakakwira-magumo kurongedza, IC inotakura yave chikamu chakakosha chechip chip kurongedza. Iyo data inoratidza kuti parizvino, chiyero cheiye anotakura IC mune yakazara yekutakura mutengo yasvika ingangoita 40%.
Pakati pevatakuri veIC, pane zvakanyanya ABF (Ajinomoto inovaka firimu) vatakuri uye vatakuri veBT zvinoenderana nenzira dzakasiyana dzehunyanzvi dzakadai seCLL resin system.
Pakati pavo, ABF inotakura bhodhi inonyanya kushandiswa kune yakakwira komputa machipisi senge CPU, GPU, FPGA uye ASIC. Mushure mekunge machipisi aya aburitswa, anowanzo fanirwa kuiswa mumapepa eABF anotakura asati aunganidzwa pane hombe pcbboard. Kana mutakuri weABF angoshaikwa, vagadziri vakuru vanosanganisira Intel ne AMD havagone kutiza njodzi yekuti chip haigone kutumirwa. Kukosha kweABF anotakura kunogona kuoneka.
Kubva hafu yechipiri yegore rapfuura, nekuda kwekukura kwe5g, gore AI komputa, maseva uye mimwe misika, kudiwa kwepamusoro-performance komputa (HPC) machipisi kwakawedzera zvakanyanya. Yakabatana pamwe nekukura kwemusika kudiwa kwehofisi yekumba / varaidzo, mota uye mimwe misika, kudiwa kweCPU, GPU neAI machipu padivi rekupedzisira kwakawedzera zvakanyanya, izvo zvakasimudzirawo kudiwa kweABF mabhodhi anotakura.
Category Blog (650) Ruzivo Rwekambani (2) Zvigadzirwa (106) FR-4 pcb (20) HDI pcb (14) Yakakwira Speed PCB (5) IC Substrate (12) BGA (5) eMMc (1) Mini LED (2) SiP (1) IC Bvunzo YeBhodi (4) Microwave pcb (27) Yakakwira Frequency PCB (24) Rogers pcb (18) Taconic pcb (1) Telfon pcb (5) Multi-rukoko pcb (16) PcB Assembly (12) Hazvichinji-chinji Flex pcb (15) Yakakosha PCB (9)